Phuket Sandbox: Ejikọla anyị na Thailand ndị ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Phuket Sandbox: Ejikọla anyị na Thailand ndị ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism
KP Ho na -ekwu okwu na Phuket Sandbox Summit nke emere na Laguna Phuket
N'ikwu okwu na Mgbakọ Sandbox Phuket nke emere na Laguna Phuket, Onye isi oche nke Banyan Tree Group, KP Ho, kpọrọ ndị na -eme iwu na Europe na gburugburu ụwa ka ha kwado Phuket dị ka mpaghara "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" dị iche.
Ndị isi njem nlegharị anya na Mgbakọ Sandbox Phuket na -arịọ gọọmentị Europe ka ha mata ọkwa Phuket dị ka ebe nchekwa maka ndị njem mba ofesi.
“Ndepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ” Sandbox bụ ihe ga -akwalite mgbake njem nlegharị anya nke ụwa, ka onye guzobere Banyan Tree Group KP Ho kwuru.
Ọ bụrụhaala na a haziri Sandbox ahụ nke ọma, dịka ọ dị na Phuket, ekwesịrị ikewapụ ya na mba ndị ọzọ.
Ka Bangkok na-alụ ọgụ ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ọrịa COVID-19, KP Ho, agwala ndị nnọchi anya Europe, ndị ụgbọ elu, ndị isi, na ndị isi azụmahịa, na maka Phuket Sandbox ga-aga nke ọma, ọ dị mkpa ka enye Phuket ọnọdụ ọnọdụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Phuket nwere ikike ibute mgbake njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, dị ka akụkọ ihe mere eme Atụmatụ Phuket Sandbox setịpụrụ ụkpụrụ maka ebe ndị ọzọ ga -eso, o kwuru. Mana, iji nwee ihe ịga nke ọma, gọọmentị kwesịrị ịghọta ya dị ka ebe dị nchebe, na-ejikọ onwe ya, kama ijikọta ọnọdụ njem ya na ndị Thailand ndị ọzọ.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Thailand na -atụle ya
Ndị KP Ho kwadoro ọnọdụ ya Ndị njem nleta na-ahụ maka njegharị nke Thailand (TAT) na Mgbakọ Sandbox Phuket. Onye osote gọvanọ maka ịre ahịa mba ofesi Europe, Afrịka, Middle East na ndị America, Siripakorn Cheawsamoot kwuru, sị: “Anyị na -anwa ịjụ gọọmentị UK ka Phuket nọrọ na ndepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'agbanyeghị na Thailand nọ na ndepụta amber. Anyị nwere nchekwube maka Phuket Sandbox. Phuket dị nchebe na anyị agaghị emebi nchekwa onye ọ bụla. ”
Ọ kwenyere na enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ 300,000 edebere ruo ngwụsị August na ụlọ nkwari akụ SHA Plus, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 13,000 na ụgbọ elu 124 ka ụbọchị 28 gachara, yana ọtụtụ nhazi ọzọ. Ahịa ndị kachasị bụ US, UK, Israel, Germany, France, UAE, na Switzerland nwere ogologo oge ịnọ ụbọchị 11.
Ka nchekasị na -eto n'ofe njem njem ndị dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na -alụ ọgụ na ọnụọgụ ọrịa, ụdị Phuket Sandbox na -aghọ ngwa ngwa na -eburu olileanya maka ụlọ ọrụ njem.